Ihe ngosi: Ihe Omni-Channel zuru oke nke ahia ahia ahia | Martech Zone
Dịka obere azụmaahịa, agbasiri m ike ịre ahịa. Ọ bụghị ahịa atụmatụ nke ahụ bụ okwu, ọ bụ ihe ndị dị mkpa iji nọgide na-enyere atụmanya aka iru nkwụsị. Ọ bụ n'ezie isi ihe mere m ji malite anyị Onye ahia ahia ụlọ ọrụ, Highbridge. Ndị mmekọ m ghọtara nke ọma na ịnwe usoro na ihe enyemaka iji kwaga njem ahịa na-aga n'ihu bụ ntọala nke azụmaahịa na-eto eto. Dị ka ogologo dị ka m bụ nke onwe m, M ga-aga nke ọma… ma m ga-na-eto eto.
Ihe ịma aka ọzọ bụ ọrụ dị iche iche achọrọ iji nyere ndị ahịa aka. Ọ na-eju m anya na VP nke Business Development na-esochi ma na-emetụkwa ọtụtụ ndị mmekọ, ụlọ ọrụ na atụmanya kwa izu. Bụrụ m enweghị ike imezu nke a. M na-akpọkarị ya nkeji iri na ise tupu nzukọ amalite, na-agwa ya ka o chetara m onye olileanya bụ na ihe mere anyị ji agwa ha okwu!
Mgbakwunye ahịa dị oke mkpa n'usoro ire ahịa. A ntị na mkpa olile anya ma nyere ha aka ime nzọụkwụ na-esote njem na njikọ aka na-ewulite ntụkwasị obi na atụmanya gị na ị bụ onye ibe nwere ntụkwasị obi.
Ọpụpụ Ahịa Strategies
Tupu m chọọ ngwa ọrụ akpaaka ahịa, aga m akwado gị ka ị chegharịa otu esi eji otu n'ime nyiwe ndị a, agbanyeghị. M inundated site na email na ngwaọrụ na-anọgide na-dị nnọọ ka nsogbu, na, na m na ozi na-arịọ ma ọ bụrụ na m nwetara ikpeazụ ozi. Amaara m na nke a bụ ngwá ọrụ na-eme nke a ma ọ na-ewe iwe. Kama ịzaghachi, m wepu aha ma ọ bụ kọọ ozi ịntanetị ndị ahụ dị ka ihe efu. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ị nwere ike imebi mmebi karịa na ntinye aka gị karịa ka ị nwere ike ime nke ọma - ọ bụrụ na ịnweghị iji ha mee ihe zuru oke.
Ka ị na-azụlite akpaaka gị, a ga m akwado gị iji akara emetụ ọ bụla tinye uru na mkparịta ụka ahụ. Ya mere, kama nke akpaghị aka ozi na-ajụ ma ọ bụrụ na m natara ikpeazụ gị ozi… kama email na-ekwu, ihe dị ka nke a nwere ike ịbụ mma:
Enwetaghị m nzaghachi ọ bụla na ozi ikpeazụ ma nwee olileanya na anaghị m enye gị nsogbu. Ọ bụrụ n’inweghị mmasị na [ngwaahịa, ọrụ, wdg.], Biko egbula ịmatị aka mee ka m mara. Ka ọ dị ugbu a, anyị nwere nnukwu ọba akwụkwọ maka enyemaka iji nyere gị aka nyocha ma anyị ga-aba uru ma ọ bụ na anyị agaghị aba.
* Jiri ikpe sitere na ụlọ ọrụ dịka nke gị. [njikọ]
* Ebook anyị dere na isiokwu ahụ. [njikọ]
* Akwụkwọ akụkọ anyị kwa izu nke na-enye nchịkọta nke isiokwu ọhụrụ anyị. [njikọ]
Ọ ga-amasị m ịkọwa site na nzukọ - ị nwere ike ịtọ oge ị ga-anọ ebe a. [njikọ]
Amanda Onye ahia
Emere m ihe ole na ole na obere ihe atụ a dị oke egwu:
Enyere m ohere ahụ iji mee ka m mara na ha enweghị mmasị. Ndị mmadụ achọghị n'ezie ịgwa ndị ọzọ ka ha kwụsị ire selling yabụ inye gị ohere ịsị ịsị mba dị mkpa. Ka anyị hapụ ikwusi ha ike na ọ na-enye ha nsọpụrụ na ọ bụghị naanị na ị ga-enwe nsogbu ha n’akwụsịghị akwụsị.
Enyere m ozi ọmụma emelitere nke nwere ike inyere ha aka ịchụpụ ndị njem ha.
Emeziri m ihe ndị ahụ na ụlọ ọrụ ha ma nye ha ozi dị mkpirikpi na ogologo oge ka ha wee nwee ike ịgbanye olu nke ozi ha họọrọ.
Enyere m ha ụzọ iji guzobe nzukọ na-azaghị email ahụ, nke nwere ike ịpụ ha site na akwụkwọ egwu wee banye nzọụkwụ ọzọ n'ime njem ahịa.
Outplay ebipụtala akwụkwọ ọgụgụ nke na-etinye usoro ịgba egwu ahịa nke ụlọ ọrụ 30:
Top ingrụ Sales Usoro
Banyere ihe ngosi
Ngosiputa ihe ngosi bu otutu uzo ntinye aka nke nwere ihe nile ichoro n’okpuru otu ikpo okwu iji nyere gi aka ime ka ikike gi nwekwuo ike itinye aka na ndi oru ahia gi. N'iji igwe okwu weghara ihe omume oku ma malite ịkpọ oku ọzọ, email ka ị nwee ike ịgbaso arịrịọ na-azabeghị, akparịta ụka iji soro ndị ọbịa webụsaịtị, igwe ntinye akwụkwọ ntinye akwụkwọ maka nzukọ, yana nyocha zuru ezu iji tụọ ma bulie ahịa gị. workflow niile dị na otu ikpo okwu.
Ngosipụta Atụmatụ Gụnyere:
Analytics - Nọgide na-egwu egwuregwu site na iji nlezianya nyocha otu usoro n’otu n’otu na nke otu.
Automation - machiini gị ahịa workflows, ịzọpụta oge na mgbe uche a ndibiat.
ikori - Nkata bụ akụkụ nke usoro ọrụ anyị kwa ụbọchị na ọwa nkwukọrịta ngwa ngwa nke mmadụ niile. Ugbu a, kpaa nkata gị na atụmanya ha mgbe ha gara na weebụsaịtị gị na nzukọ akwụkwọ ozugbo.
Ịkpọ oku - Worldwide ọkpụkpọ na a ton ndị ọzọ dialer atụmatụ imechi amụọ ngwa ngwa. Abanye na ndetu oku na-akpaghị aka n'ime CRM gị.
Email nsuso - Industrylọ ọrụ kacha mma email na-emeghe nsochi, njikọ pịa nsuso, na nzaghachi nchọpụta iji nyere gị aka iji obi ike iru ogo gị n'ọtụtụ.
Mmekọrịta - Mmekọrịta na Salesforce, Crelate, Zapiet, Gmail na Pipedrive.
Akwụkwọ-nzukọ - Kekọrịta kalenda gị n'ime ime akwụkwọ ozi na nzukọ akwụkwọ na atụmanya gị ozugbo, na-enweghị ozi ịntanetị na azụ. Ihe ncheta dị ebe a iji nyere gị aka ibelata ihe nkiri niile.
Otutu - Gaa na atụmanya gị ebe ọ bụla ha dị wee bido mkparịta ụka ngwa ngwa site na iji usoro nkwukọrịta multichannel.
Ngwaọrụ arụpụta ihe - Mgbakwunye Chrome na-etinye email gị na steroid nwere njirimara dịka nsuso na-emeghe, nsuso njikọ, zipu mgbe e mesịrị, ncheta, nzukọ, ndebiri, na usoro.
Ihe ogbugbu - Ezubere iji rụọ ọrụ usoro na ọsọ nke ọkụ n'ọtụtụ na-echekwa 2hrs / ụbọchị nke oge. Mara ọrụ ndị ị ga-arụ, mgbe, na ịgba ọsọ niile na-enweghị ịchọgharị n'etiti ibe.
Ndepụta weebụsaịtị - Gaa Leta ificationsma Ọkwa na atụmanya nchọgharị omume nke gị na ebe nrụọrụ weebụ na-enyere gị aka ịgụ uche ha ma hazie mkparịta ụka na-kwụpụta na tọghata ngwa ngwa.
Ngosipụta nwere Ọnwale Ọnwụnwa 14 nke ị nwere ike ịdebanye aha iji lelee usoro ha:
Na-anwale Ọnwụnwa Free
Tags: ọkpụkpọgsuite mwekotaotú dee ihe outbound ahịa emailnzukọ akwụkwọnzukọ n'ịntanetịonye na -akpọ okuoutbound ahịa emailoutbound sales email Atụmatụnkwa ọpụpụ ahịandụmọdụ ndapụtaihe ngosiNkwado ire ahịaArụ ọrụ arụ ọrụ ahịamkpokọta nkata